Xiddigga Yanastasia ayaa ku soo bandhigaya Todobaadka Fashion Week Moscow
Maalinta labaad ee 33-aad "Todobaadka Fashion Week ee Moscow. Ayaa laga sameeyay Ruushka "waxaa lagu soo bandhigay muuqaal aad u muuqda oo ku saabsan ururinta Yana iyo Anastasia Shevchenko, oo abuuray astaanta nooca Yanastasia. Bandhiga muuqaalka, oo ay diyaariyeen nashqadeeyayaasha ka qaybqaadashada xiddigo badan oo ka mid ah ganacsiyada Ruushka, ayaa martiqaadka martiqaadka u oggolaaday waqti wanaagsan kadib mashruuc ganacsi oo mashquul ah maalintii, oo ay ku jiraan siminaaro iyo miisaska wareega ee loogu talagalay xirfadlayda dharka.
Labada ciyaaryahan ee Ruushka ah maaha markii ugu horeysay ee muujiya inay isticmaalaan noocyo xirfadle ah, laakiin waxay ka soo jeedaan xiddigaha gudaha. Ksenia Borodina iyo gabadheeda Marusya, Larisa Kopenkina iyo wiilkeeda Yuri, Lolita Milyavskaya iyo qoyskeeda, Kornelia Mango, Pier Narciss, Nikita Dzhigurda, Shura, Anastasia Volochkova, Sergei Zverev iyo kuwo kale oo badan ayaa la socday xayawaanka.
Noocyada, qaabka ay ku qeexi karto noocyo kala duwan oo ka socota cayaaraha isboortiga ilaa dharka habeenkii, ayaa la sameeyey iyadoo loo eegayo ujeedooyinka qowmiyadeed: noocyo kala duwan oo ah midabyo badan, farabadan oo farabadan oo ubax leh, qaabab fudud oo naqshadaysan, qaabab muuqaal ah oo ku saabsan madaxyada haweenka. Waxay ahayd mid la ogaan karo in moodooyinka ay dareemayaan raaxo weyn oo ka timid inay ka shaqeynayaan muusikada, iyo dhagaystayaasha, inkastoo qaar ka mid ah ururinta muqaalka ah, ay qaadan karaan laba sawir ama fikrado si buuxda loogu ogaanayo nolol maalmeedka.
Dharbaaxo dhar ah 2009
Waraaqo sicir ah oo ku saabsan ololaha cusub ee Calvin Klein
Bandhiga gaarka ah ee koofiyadaha by Philip Tracy ee St. Petersburg
Ashley Graham oo ah nooca loo yaqaan 'plus-size model' ayaa soo bandhigay qalab cusub oo loogu talagalay
Macmacaanka Apple iyo bocorka
Apple ayaa u tartamaysa raspberries
Brewer's khamiirka ujeedooyin daaweyn
Ma jiraan bacyo badan: waxaan dooranaa bacaha macaamiisha leh ee Econika
U hel tacliin sare
Sidee loo hagaajiyaa shaqada xiidmaha?
Pasta leh sprouts Brussels iyo hilib doofaar
Salaan laga bilaabo Sibtember 1aad ilaa macallimiinta: laga bilaabo ardayda iyo waalidiinta, hambalyo iyo farxad la taaban karo ee jaaliyadaha ku jira qadarka iyo aayadda
Maxaad ugu baahan tahay hurdo galin qof weyn ah?
Cilad-celinta xayawaanka guriga
Sidee loola socon karaa riyaaqnimada inta lagu jiro uurka?
Kaarka qurxinta ee March 8
Waxyaabaha qurxinta ee maqaarka